Cuntada Qalalan ee Qalalan | RayHaber | raillynews
HomeWarqad Hordhac ahCuntada Bisada qallalan
20 / 05 / 2020 Warqad Hordhac ah, TURKEY
cuntada bisadaha qallalan
Awoowayaasha bisadaha waa xayawaan ku nool cidlada dhexdeeda. Sidaa darteed, awoodooda ku wajahan kaadida ayaa la soo saaray si loo baabi'iyo biyo luminta xad dhaafka ah oo ay awood u siiso jirka inuu ilaaliyo biyaha. Si kastaba ha noqotee, kartidan ayaa badanaa sababa bisadaha inay yeeshaan cudurrada kaadida. Xal ahaan, barnaamij nafaqo oo leh biyo ku filan, borotiinno iyo macdanta macdanta ayaa lagu talinayaa. Qaabkan, caafimaadka kelyaha ee bisadaha sidoo kale waa la ilaalin karaa.
Qoyan ama qalalan cuntada bisadda Waxay bixisaa isla ilaalintii caafimaadka kelyaha ee bisadaha. Hase yeeshe, milkiilayaasha bisadu waxay door bidaan inay siiyaan bislaadooda cunto isku dhafan. Si kale haddii loo dhigo, waqti ka waqti, waxay siiyaan cunno bisad qalalan waqti ka waqti. In kasta oo aysan dhibaato ahayn illaa imminka, ikhtiyaar waa in la sameeyaa iyadoo la tixgelinayo dheelitirka pH inta la dooranayo cuntada bisadda qallalan.
Sidee ayay nafaqada bisadu u noqon kartaa?
Iyada oo ay la socoto cuntada bisadda ee aad doorato, waa inaad xaqiiqdii siisaa bisaddaada biyo nadiif ah oo biyahani waa inay noqdaan biyo la cabbo. Haddii kale, kiristaalo dhaawac leh ama dhagxan kaadiheysta ayaa laga yaabaa inay ku samaysmaan xayawaankaaga. Bisaduhu waxay u baahan yihiin inta u dhaxaysa 55 iyo 70 ml oo biyo ah miisaanka jidhka ee qaadasho kasta. Celcelis ahaan, waxay cabbaan 10 illaa 12 jeer maalintii. Heerarka cabitaanka biyaha waxay sidoo kale kuxiran yihiin walxaha qalalan ee cuntada bisadda. Marka tani waxay la mid tahay 2-2.5 ml halkii garaam ee bisada qalalan ee ay cunaan.
Bisadaha ma jecla cuntada aadka u kulul ama aad u qabow. Sidaas gaar ahaan qasacadaysan cuntada bisadda waa in lagu siiyaa heerkulka qolka.
Maxaan Sameeyaa Si Looga Sameeyo Katshuhu Inay Cabbitaan Yaraan?
Si loo hubiyo in bisaddaada ay cabto biyo ku filan, waa inaad si joogto ah u siisaa biyo saafi ah oo aad u fududaato helitaanka biyo nadiif ah. Si taas loo gaaro, waxaad ku ridi kartaa dhowr barkadood oo biyo ah gudaha guriga. Waa inaad si fudud u xafidaa saxamadaas. Bisadaha guud ahaan waxay doorbidaan inay biyo ka cabbaan dhalada, birta ama weelasha biyaha. Marka waa inaad fiiro gaar ah u siisaa xulashooyinkaan markaad iibsaneyso barkadda bisadda ama baaquli. Waa inay ahaataa 1 mitir inta udhaxeysa weelka ciidda iyo weelka biyaha si biyaha bisadu aysan u helin bakteeriya ama fayras.
Haddii aad u maleynaysid bisadaada inay biyo yar cabeyso, waad kordhin kartaa cabitaanka xayawaankaaga xayawaanka ah adoo ku daraya biyo yar oo kulul si ay u qallajiso cuntada bisadda haddii loo baahdo. Xitaa waad ka dhigi kartaa cuntada mid macaan oo cabitaan leh oo leh maraq aan kareem lahayn.
Bisadaha qaar waxay jecel yihiin inay biyo ka cabbaan biyo socda. Iyada oo laga jawaabayo codsigan, ilo biyo ayaa laga soo saaray bisadaha. Waxa kale oo aad gacan uga geysan kartaa bisaddaada cabidda biyo ku filan adigoo iibsanaya.
Sheekada Maqaarka Cagaaran Felix oo u ordaaya Cuntada adigoo ka shaqeynaya Saldhigga Tareenka
Tareenka dhulka ee Ankaparkta oo qalalan
Ogeysiiska Qandaraaska: Baadhiga Nooca Qalabka Nadiifka ah waa la iibsan doonaa
Qiimaha Doolarka Uuudaq Qiimaha Gawaarida
Hawlgabka Samatabbixinta ee Metrobus Station
Golaha Wadada Cat Road ee ku yaal Bay Bridge
3. Burburinta waddada bisad waxay ka bilaabantay Biyaha
Waddada Jidka Boosaasta
Indhaha Tuulada 'Village Rouge Cat' Indhaha